Izingxoxo zamahhala zama-2021
Ungachithi isikhathi ufuna izingxoxo zamahhala zamahhala. Siqhathanise futhi senza uhlu lwamasayithi ezingxoxo zamahhala amahle kakhulu.
IPeriscope uhlelo olusakaza bukhoma lwaseMelika lwe-Android ne-iOS olwenziwe nguKayvon Beykpour noJoe Bernstein futhi olutholwe yiTwitter ngaphambi kokwethulwa ngo-2015. UBeykpour noBernstein beza nomqondo wePeriscope ngenkathi behambela phesheya ngo-2013.
INirvam umphakathi onamalungu angaphezu kwezigidi ezi-3 e-Italy, osebenza kusukela ngo-2005, indawo yokuphola online phakathi kwabantu abavela ezindaweni zonke, behlanganiswe yisifiso esifanayo sokufuna ubungani, uthando, ukuhlangana, izikhala nezindlela zokuzijabulisa okuvamile. Ngakho-ke, yindawo ebonakalayo lapho abasebenzisi bangahlangana khona, benze abangane, bashintshisane ngemibono, bakhulume ngezintshisekelo zabo, futhi kungani, bangathola umlingani womphefumulo.
I-Chat Hispano inethiwekhi evulekile I-Chat Hispano iyinethiwekhi yokuxoxa enkulu kunazo zonke ngeSpanishi futhi inhloso yayo ukuxhumana nabantu abaningi ngangokunokwenzeka. Sifuna wonke umuntu akwazi ukwabelana ngolwazi, imibono kanye namaphrojekthi. Futhi yini ekubona kunesidingo.
Xoxa ngaphezu kwama-40
Xoxa Ngaphezu kuka-40 kweGentildonne e Gentiluomini ingxoxo yamahhala yase-Italy ngaphandle kokubhaliswa, engaziwa, mahhala, okulula ukuyisebenzisa, esheshayo ukuyifinyelela, nge-webchat online.
Ingxoxo yamahhala ku-INTERIA.PL (CZATeria) isebenza kuzo zonke iziphequluli. Yenza abangane abasha, ube nezingxoxo ezingaziwa, thumela izithombe kubasekeli bakho.
Qhathanisa izingosi zokuxoxa zevidiyo bese ujoyina noma yiziphi izinkulungwane zethu zamagumbi okuxoxa ngevidiyo ukuze ukhulume nabantu emhlabeni wonke.
Amasayithi engxoxo afana ne-omegle
Zonke izindlela ezingcono kakhulu ze-omegle kusayithi elilodwa elilula. Hlola zonke izindlela ezikhona ze-omegle bese ubona izinzuzo zayo.